NLD – Nyang Media
Fact Checkဇန်နဝါရီ 20, 2021
Fact Checkဇန်နဝါရီ 16, 2021
UEC ဥက္ကဌ ဦးလှသိန်း ၊ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင် ဦးမြင့်နိုင်၊ NLD တာဝန်ရှိသူတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ မုံရွာအောင်ရှင်၊ ဒေါက်တာမျိုးညွန့် နဲ့ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံး၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဇော်ဌေး တို့ကို အတိုင်ပင်ခံရုံး က ညတွင်းချင်း...
Fact Checkဇန်နဝါရီ 15, 2021
NLD က တင်မယ့် သမ္မတ ဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်း ဟာ မွတ် စစ်စစ်ကြီးပါတဲ့။ ကဲ သေနတ်မဖောက်ပဲ မြန်မာကို သိမ်းဖို့ကြံပြီ ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာ ကို Min Zay Yar အမည်ရ ဖေ့စ်ဘွတ်အကောင့်...
Fact Checkဇန်နဝါရီ 13, 2021
ပဲလှော်ကြား ဆားမညပ်ချင်လို့ NLD အနိုင်ရ ကိုယ်စားလှယ် နှစ်ရာကျော် ဟာ မနေ့ညက နုတ်ထွက်စာတင်ခဲ့ပြီး နုတ်ထွက်တဲ့ အမည်စာရင်းမကြာမီ ထွက်လာမယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာကို ရဲရင့် အမည်ရ ဖေ့စ်ဘွတ်အကောင့် က ဇန်နဝါရီ (၁၂) ရက်နေ့...